Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina tsy misy Quarantine mankany Singapore izao miaraka amin'i Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Lufthansa sy Singapore Airlines dia hiara-manolotra ny iray amin'ireo sidina Vaccined Travel Lane isan'andro, na avy any Frankfurt na Munich, manomboka ny 16 septambra.
Sidina isan'andro hatramin'ny 16 septambra miaraka amin'ny Singapore Airlines.
Ny fidirana tsy misy Quarantine mankany Singapour raha tsy manomboka any Alemana ny dia.
Mihatra amin'ny sidina manokana, fantatra amin'ny hoe sidina Vaccined Travel Lane (VTL), ny famotsorana ny karantina.
Ny fidirana ao Singapore avy any Alemana ho an'ireo mpandeha vita vaksiny feno dia ho azo atao indray manomboka amin'ny 8 septambra. Ny quarantine napetraka teo aloha rehefa tonga tany Singapour dia tsy ho takiana intsony manomboka izao. Alemana no firenena voalohany nanasonian'ny tanàna mega any Azia atsimo atsinanana ny fifanarahana momba izany.
Mihatra amin'ny sidina manokana, fantatra amin'ny hoe sidina Vaccined Travel Lane (VTL), ny famotsorana ny karantina. Lufthansa ary Singapore Airlines dia hanolotra iray amin'ireo sidina VTL ireo isan'andro, na avy Frankfurt na Munich, manomboka ny 16 septambra. Azo atao ny manao famandrihana. Ny mpanjifa koa dia afaka misoratra anarana amin'ny sidina VTL amin'ny tranokalan'ny governemanta Singapore manomboka ny 1 septambra.
"Ny fisokafan'ny Singapore dia tsy vitan'ny ahafahan'ny olona mitsidika namana sy fianakaviana na mihaona amin'ireo mpiara-miasa aminy indray, fa mandefa famantarana lehibe ihany koa amin'ny firenena hafa ao amin'ny faritra," hoy i Elise Becker, Lehiben'ny Sales for Lufthansa any Azia-Pasifika. “Zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fiaraha-miasa amin'ny firenena mba hitady vahaolana hamerenana amin'ny laoniny ny sidina iraisam-pirenena ihany koa. Lufthansa sy Singapore Airlines dia mandray anjara lehibe amin'izany fampandrosoana izany. ”
Hatramin'ny fanambarana nataon'ny governemanta Singaporeana dia nitombo avo telo heny ny fangatahana sidina manelanelana an'i Alemana sy Singapore.
Ireto masontsivana manaraka ireto dia mahafeno ny fepetra ho an'ny mpandeha amin'ny sidina VTL mankany Singapore:
vaksiny feno tanterahina any Alemana na Singapour miaraka amin'ny Pfizer-BioNTech / Comirnaty, Moderna, na vaksinin'ny WHO EUL hafa.
mijanona any Alemana sy / na Singapore mandritra ny 21 andro misesy farafaharatsiny alohan'ny hiainganao mankany Singapore. Ny mpandeha VTL dia tsy mila manana zom-pirenena alemanina.
fanandramana Covid-19 PCR misy valiny ratsy nalaina 48 ora indrindra alohan'ny fiaingany ary fitsapana PCR faharoa rehefa tonga tany Singapour. Mandra-pahatongan'ny valiny ratsy an'ity lahatsoratra ity dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny hotely na trano fonenan'izy ireo any Singapore ireo mpandeha. Miankina amin'ny faharetan'ny dia, ny fitsapana PCR fanampiny roa fanampiny dia mety ilaina any Singapore.
famandrihana sidina amin'ny sidina VTL voatondro.